I-Semalt Islamabad Expert Inikeza Amasu Ukubhekana Ne-Spam Yokudlulisa
I-Google Analytics ingenye yezinhlelo zokulandelela ezithembekile kakhulu nezinamandla kuze kube yimanje. Kukusiza uqaphe ikhwalithi yethrafikhi yakho futhi kwandisa amathuba akho okuthola okuningi kwi-inthanethi. Ngeshwa, iqhinga elimnyama eliduna nabakwa-spammers lisebenzisa ugaxekile we-referrer. Bahlose ukukhohlisa nge-akhawunti yakho ye-Google Analytics, futhi izinga lokunciphisa isayithi lakho landa.
Kungakhathaliseki ukuthi ungumqambi wewebhu, umthengisi wokuqukethwe, uchwepheshe we-SEO noma i-blogger, kufanele ufunde amathiphu alandelayo avela ku-Sohail Sadiq, isazi esiphambili se-10.
Yini i-Referrer Spam?
Ugaxekile wokudlulisa uhlobo olungajwayelekile lwezinto eziboniswa ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, futhi kuphela ama-webmasters angayibona - portarifiuti esterno. I-spam yokudlulisa impela imoto ekhohlisayo futhi inqanda ikhwalithi yokuvakashelwa kwakho. Uvakashela isayithi lakho kodwa izinga lokunciphisa isikhathi kanye nesikhathi esichithwa ekhasini akulindelekile. Umuntu othungayo uyisixhumanisi sokuthi abakwa-spammers babelane ngekhanda le-HTTP uma iziphequluli zewebhu zihamba ukusuka kwelinye ikhasi kuya kwelinye. I-akhawunti yakho ye-Google Analytics izolandelela lolu lwazi futhi luzoyikhombisa njengokuvakashelwa ngokuqondile, okuyinto empeleni kungenalutho.
Amathiphu okubhekana nogaxekile wokudlulisela:
Kunezindlela ezithile zokubhekana ne-spam yokudlulisela ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ezinye izinto ezinkulu okufanele uzikhumbule zichazwe ngezansi.
Ithiphu # 1: Ukudluliselwa kogaxekile ku-Piwik:
E-Piwik, ochwepheshe baqala ukusebenza ekunciphiseni izinyanga zogaxekile zokudlulisela ezedlule. Uma usebenzisa i-Piwik, kubalulekile ukugcina lokhu kubuyekezwa kwensizakalo, futhi akufanele upheqa amawebusayithi angaziwa nganoma yiliphi izindleko. Ngalesi sevisi, kuzoba lula kuwe ukukhipha ugaxekile we-referrer kusuka emibikweni yakho ye-Google Analytics futhi ungagcina usuku lwakho lubuyekezwa ngehora. Uma uthola iwebhusayithi esolisayo kwisimo sakho se-Google Analytics, kufanele uyifake ohlwini lwabantu abamnyama likaPiwik ngokushesha. Uma abakwa-spammers abasha beveza nsuku zonke, ungabangela bonke ohlwini lwabalandeli bakaPiwik futhi bangathuthukisa ikhwalithi ye-traffic yakho yewebhu.
Ithiphu # 2: Ukudluliselwa kogaxekile ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics:
I-Google Analytics ayinikeli ukuvikelwa kogaxekile, kodwa ungakwazi ukudala ngesandla izihlungi ukuze uqinisekise ukuphepha nokuphepha kwesayithi lakho. Ukudala izihlungi ku-Google Analytics, kufanele uhambe kuthebhu yomlawuli bese uchofoza kukho konke okukhethwa kukho ukuhlunga. Lapha, kufanele udale izihlungi ezintsha zenkambiso ezingafaki ugaxekile wokudlulisela ngokusekelwe kuzilungiselelo zakho. Esikhathini sigaba seFree Filter, ungangena zonke izizinda ezigaxekile bese uziqeda phakathi kwemizuzwana. Ingxenye engcono kakhulu yale nqubo yukuthi ungakwazi ukukhipha noma yikuphi isixhumanisi sogaxekile sokudlulisela futhi awudingi ukusebenzisa noma yimaphi amathuluzi akhethekile. Ngisho noma uthola izicelo eziningi ezivela ku-spammers, ungakha izihlungi eziningi futhi uzifake konke ukuthuthukisa izibalo zakho ze-analytics.
Uma ufuna ukugwema abagaxekile abaningi ngesikhathi, amathiphu amabili angenhla azosebenza kangcono kuwe. Okokuqala, kufanele uthuthukise ukuqonda ukuthi yikuphi ukugaxekile kogaxekile nokuthi kuthinta kanjani i-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ungavikela futhi isayithi lakho ngokushintsha izilungiselelo zefayela lakho le-.htaccess, kodwa lokho kuyinto yokuzikhethela.